Xukuumadda Somaliland oo Ka Hadashay Askari Liyuu Boolis ah oo U Soo Talaabay Xadka Somaliland iyo Khasaaraha Ka Dhashay – WARSOOR
Wajaale – (warsoor) – Laba askari oo ka tirsan Liyuu booliska dawlad deegaanka Somaalida Itoobiya ayaa la sheegay inay u soo talaabay xadka Somaliland waxanay mid ka mid ah labadda askari lagu dhaawacay iska hor imaad dhex maray iyaga iyo ciidamo ka tirsan Somaliland.
Sida ay sheegeen maamulka Somaliland labada askari ee ka tirsan Liyuu booliska ayaa soo galay degmadda xadka ku taala ee garbahaaray waxaanay halkaasi ku baadheen dad reer Somaliland. Ciidamada Somaliland ee ku sugan xadka ayaa hawl-gal ay ugu baxeen waxa ay ku dhaawacameen labadii askari mid ka mid kii kalena gacanta ayey ku soo dhigeen.
Wadda hadal dhex maray maamulka Somaliland iyo maamul dawladd deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu go’aansaday in gacanta loo galiyo labadii askari ee soo talaabay dawlad deegaanka Soomaalidda Itoobiya iyo hubkoodii.
Halkan ka daawo warkaasi oo aanu ka soo xigay SLSC: